11-11-11: Raiso Ny Fakantsarinao Ary Alaivo Sary Ny Fiainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 17:09 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, عربي, Deutsch, Français, Español, русский, Português, বাংলা, Ελληνικά, македонски, 日本語, English
CCBY an'ny NASA Goddard Sary sy Lahatsary
Niara-niasa tamin’ny Tetikasa 11Eleven ny Global Voices ho fanampiana amin’ny fakàna sary ny zavatra iainan’ny olombelona. Hatraiza ny fahasamihafana ary hatraiza ny fitoviana eo amin’ny fiainantsika? Hanampy amin’ny famaliana izany fanontaniana izany ny lahatsary hatao ao anatin'ny 24 ora amin'ny 11 Novambra 2011 manerana izao tontolo izao, ary amin'ny fiteny samy hafa.
Nametraka lohahevitra 11 samy hafa azonao hifantohana ny 11Eleven: fanombohana, ratram-po, manao firariana, finoana, fahazarana, rano, herim-po, lalao, haizina, hatsaran-tarehy sy fitiavana; ary amin’ny alàlan'ireo teboka iaingàna ireo no hanekeny ny sary, hira, feo, lahatsary, ary votoaty navoaka ao anaty aterineto hatao mandritra ny 11 Novambra 2011, mba hamadihana azy ireo ho rakikiran'izao tontolo izao, hisy horonantsary fanadihadiana maharitra 2 ora sy boky mirakitra sary hovokarina sy hozaraina manerana ny tany.
Ampiakaro anaty aterineto izany ary asio ny tenifototra #11ElevenLIVE, araka ny azavaina anatin'ity lahatsary manaraka ity:
Nanatevin-daharana ny ekipa i Imogen Heap, mpiangaly mozika nahazo mari-pankasitrahana Grammy, ka Mpamokatra Hira no andraikiny anatin'izany, izy no hamokatra ny feonkira hanaingo ilay horonantsary fanadihadiana ary mbola izy ihany koa no hiandraikitra ilay rakikiran'izao tontolo izao.
Ny tombony azo avy amin’ny fivarotana ilay rakikira sy ilay boky mirakitra sary, ary ilay horonantsary fanadihadiana dia harotsaka manontolo anohanana ireo fikambanana mpanao asa soa sy ireo hafa, isan'izany ny Global Voices.
Mirakitra lahatsarin'izao tontolo izao efa roa taona misesy izay (2010-2011) ny Iray Andro Eto An-tany. Tamin'ny taon-dasa (2010) dia naka sary ny zavatra niainan’izao tontolo izao nandritra ny 24 ora izy ireo tamin'ny 10-10-10. Vokatra tamin'izany ny tahirin-dahatsary ahitàna ireo toerana nangalana azy, sy ny horonantsary lava izay miaraka alefa manerana ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao noho ny fiaraha-miasan’ny fikambanana amin'ny Firenena Mikambana.
Ity manaraka ity dia fanazavana ambadiky ny sehatra ny fiantombohan’ny tetikasa sy ireo zava-nisongadina tanatin'ilay horonantsary fanadihadiana, toy ny sary avy any Korea Avaratra sy ny fanambadiana tany Kosovo.
Ity manaraka ity indray dia ampahany amin’ilay horonantsary fanadihadiana, mampiseho ny sasany amin'ireo sombitsombin-dahatsary izay voaangona tamin'io andro io (10-10-10), manerana izao tontolo izao.
Samy azonao atao ny mandray anjara amin'ireo tetikasa roa ireo ny 11 Novambra (2011). Manorata anarana, alefaso ny fakantsary, raketo ny zava-mitranga mandritra io andro io, ary ampiakaro ato anaty aterineto ny votoatinao. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny One day on Earth sy ny Tetikasa 11Eleven.